Model အသစ် Acer Iconica Tab A500, A200 Root လုပ်နည်း နှင့် Root tool ~ ITmanHOME
12:08 နည်းပညာ No comments
Model အသစ် Acer Iconica Tab A500, A200 Root လုပ်နည်း နှင့် Root tool
၁. Acer table Iconia A500 Setting ထဲမှာ >Applications>Development>Enable USB Debugging ကို
On ထားပေးပါ ။
၂. Gingerberak.apk ကို Download ဆွဲပါ ။
၃. Acer table Iconia A500 Setting ထဲမှာ >Applications ထဲမှ unknown sources ကို
Enable installations ကို လုပ်ပေးပါ ။
၄. Acer table Iconia A500 ကို ကွန်ပြူတာနဲ့ ချိတ်ဆက်ပြီး downlod ဆွဲထားသော Gingerberak.apk ကို
“momory card” သို့ထည့်ပါ ။
၅. Gingerberak.apk ကို Run ပါ။ menu ထဲမှ “Root Device” ကို ရွေးပေးပါ ။
၆. Gingerberak က Superuser ကို install လုပ်ပြီး reboot ကျသွားပါလိမ့်မယ် ။
၇. စက်ပြန်တက်လာချိန်မှာ သင့် Acer table Iconia A500 ဟာ “root” အောင်မြင်ပြီး Superuser ကိုရရှိသွားပါပြီ ။
……. အဆင်ပြေကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ် …………….
Credit - အီးတီ